ဧရာညီနောင်: Windows XP7Ultimate Royale SP3
Window XP ကို Window7ပုံစံသုံးချင်သူတွေအတွက် Stable ကျတဲ့ ၀င်ဒိုးတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ် SkyDriver v9.9 နဲ့အတူ SATA Driver Window ဖြစ်တဲ့အတွက် Driverလိုမှာကိုတော့မပူပါနဲ့ Destop သမားတွေအတွက်ဆို မားသားဘုတ် နဲ့ VGA အခွေတောင်မလိုပါဘူး.......။Window install လုပ်ပြီးတာနဲ့ တန်းပြီးသုံးလို့ရပါတယ်.............။ Gadgets တွေကတော့ Window7အတိုင်းပဲ အလန်းလေးတွေနော်.........း)အချိန်မရလို့ ထပ်ပြီးတော့ရှင်းမပြတော့ပါဘူးဗျာ မရှင်းတာရှိရင်တော့ ထပ်မေးနိုင်ပါတယ်.............။
# Auto drivers get: Yes – SkyDriver v9.9.
# Hotfixes: Yes (updated to December 2010)
# File Photo: File ISO standard.
# File download: WinRAR.
အပိုင်း (3) ၊ အပိုင်း (4)
Posted by ဧရာညီနောင် at 2:57 AM